असोजभित्रै २ करोड खोप ल्याइने, कहाँबाट कति खोप आउँदैछ ? – उजेली न्यूज
प्रकाशित मिति : १८ श्रावण २०७८, सोमबार ०८:५०
काठमाडौं । सरकारले असोजसम्म नेपालमा कोभिड १९ विरुद्धको झन्डै दुई करोड डोज खोप ल्याउने दाबी गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा असोज मसान्तसम्म १ करोड ८३ लाख ८२ हजार ८५० र चैत मसान्तसम्म सम्पूर्ण नेपालीलाई पुग्नेगरी खोप ल्याउने जनाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले गृहमन्त्रीसहित विभिन्न उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको बैठकमा आइतबार एकसाताभित्र १६ लाख चिनियाँ र १६ लाख जापानी गरी ३२ लाख डोज खोप आउँदै गरेको जानकारी दिए ।
यसअघि साउन १५ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै चैत मसान्तभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई पुग्नेगरी खोप ल्याइने जनाएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार चीनको सिनोफार्म कम्पनीबाट थप ६० लाख डोज खरिद सम्झौता अगाडि बढेको छ ।
जापानले घोषणा गरेको १६ लाख र भारतसँग खरिद गरिएको १० लाख डोज अष्ट्राजेनिकाको खोप आउँदैछ । योसहित नेपालमा असोज मसान्तसम्म कोभिड १९ विरुद्धको कुल १ करोड ८३ लाख ८२ हजार ८५० डोज खोप आउनेछ ।
त्यसैगरी कोभ्याक्स कार्यक्रमको लागत सहभागितामा खरिद गरी १ करोड ५० लाख डोज खोप ल्याइनेछ भने १२ वर्षमाथिका बालबालिकाको लागि ६० लाख डोज फाइजर खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
कोभ्याक्स सुविधाबाट प्राप्त हुन बाँकी १ करोड १३ लाख डोज खोप क्रमशः प्राप्त हुँदै जाँदा चैत्र मसान्तसम्म सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध हुने आकलन मन्त्रालयको छ ।
नेपाललाई पहिलो पटक भारत सरकारले १० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप अनुदानमा दिएको थियो ।
त्यस्तै नेपाली सेनालाई दिएको १ लाख डोज कोभिसिल्ड खोप उपहारमा प्राप्त भएको थियो भने कोभ्याक्स कार्यक्रममार्फत् ३ लाख ४८ हजार डोज कोभिसिल्ड खोप आएको थियो ।
यसबाहेक सरकारले भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग खरिद गरेको २० लाखमध्ये १० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप नेपाल ल्याइएको थियो । यसरी भारतबाट हालसम्म जम्मा २४ लाख ४८ हजार डोज कोभिसिल्ड खोप नेपाल आइपुगेको छ । त्यस्तै चीनबाट दुई पटक गरी अनुदानमा १८ लाख डोज भेरोसेल खोप प्राप्त भएको थियो ।
चीनको सिनोफार्म कम्पनीबाट पछिल्लो समय ४० लाख डोज भेरोसेल खोप सरकारले खरिद गरी ल्याइसकेको छ । यसरी चीनबाट जम्मा ५८ लाख डोज भेरोसेल खोप आएको छ ।
त्यस्तै अमेरिकाले अनुदानमा दिएको जे एण्ड जे खोप १५ लाख ३४ हजार ८५० डोज गरी नेपालमा हालसम्म जम्मा ९७ लाख ८२ हजार ८५० डोज खोप आयो । नेपालमा साउन १७ गतेसम्म १८ लाख १३ हजार ४ सय ७१ जनाले कोभिड १९ विरुद्धको दुवै डोज खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक रहेको छ ।
त्यस्तै ४० लाख ६४ हजार २ सय ८८ जनाले पहिलो डोज खोप लगाएका छन् । उमेर समूह तथा जोखिममा रहेका वर्गहरुको प्राथमिकताका आधारमा अब आउने खोप वितरण गरिने स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशखाले जनाएको छ ।
Previous: विद्यालयमा अझै पठन पाठन गर्ने अवस्था छैन : प्रजिअ गैरे
Next: रुकुम पश्चिममा नेकपाको विरोध प्रदर्शन